Ezivakashini ezifikayo: Sicela ulandele ngomusa izikhombisi-ndlela nge-imeyili njengoba indawo ye-Airbnb ivaliwe kancane!).
Isicoci siyatholakala uma usicela.
Qaphela: ngicela ubone iphinikhodi/imephu yami ukuze uthole indawo eqondile yekotishi!
Umphathi we-host host othandekayo ubizwa ngokuthi u-Pamela., futhi uzohlangana nawe futhi anikeze okhiye njll (ikhiya yomnyango oyinhloko i-fiddly kancane ngakho-ke ngomusa ube nesineke!) futhi kuyoba yindawo yokuxhumana eyinhloko yekotishi ngesikhathi sokuhlala kwakho. IsiNgisi sakhe sihle kodwa ungase udinge isineke ngocingo. Uhlala nje imizuzu emi-5 ukusuka endlini!
Umphathi we-host host othandekayo ubizwa ngokuthi u-Pamela., futhi uzohlangana nawe futhi anikeze okhiye njll (ikhiya yomnyango oyinhloko i-fiddly kancane ngakho-ke ngomusa ube nes…